Australia ayaa ciidamo u dirtay jasiirada Solomon kadib rabshado rabshado wata
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Solomon Islands » Australia ayaa ciidamo u dirtay jasiirada Solomon kadib rabshado rabshado wata
Wararka Australia • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Dowladda • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Wararka Solomon Islands • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Mudaaharaadyada ayaa lala xiriiriyay dhowr dhibaatooyin maxalli ah - laga yaabee midda ugu weyn ee ay ka mid tahay go'aanka xukuumadda Sulaymaan ee 2019 si ay u jarto xiriirka diblomaasiyadeed ee Taiwan iyada oo u janjeerta Shiinaha.
Raisalwasaaraha Australia Scott Morrison ayaa ku dhawaaqday in Australia ay u dirtay booliis, iyo askar Jasiiradaha Solomon si loo xakameeyo rabshadaha rabshadaha wata.
Sida laga soo xigtay ku Ra'iisul Wasaaraha, 75 sarkaal oo ka tirsan booliiska federaalka Australia, 43 askari iyo ugu yaraan shan diblumaasiyiin ayaa ku wajahan jasiiradaha "si ay u bixiyaan xasilooni iyo ammaan" iyo inay ka caawiyaan maamulada maxalliga ah si ay u ilaaliyaan kaabayaasha muhiimka ah.
Hawlgalkooda ayaa la filayaa inuu qaato dhowr toddobaad, wuxuuna ku soo beegmay iyadoo ay sii kordhayaan qalalaasaha, iyadoo dibad-baxayaashu ay dhawaan isku dayeen inay xoog ku galaan xarunta baarlamaanka qaranka.
Mudaaharaadyadu waxay la xidhiidhaan tiro dhibaatooyin maxalli ah - laga yaabee midda ugu weyn ee ay ka mid tahay go'aanka xukuumadda Sulaymaan ee 2019 si ay u jarto xiriirka diblumaasiyadeed ee Taiwan iyada oo u xaglinaysa Shiinaha, oo u aqoonsan Taiwan qayb ka mid ah dhulkeeda.
Morrison ku adkaystay in "aysan ahayn ujeedka dawladda Australia si kasta oo ay u farageliso arrimaha gudaha ee Jasiiradaha Solomon", isagoo intaas ku daray in ciidanku "aan ka muuqan wax mowqif ah oo ku saabsan arrimaha gudaha" ee qaranka.
Raiisel wasaaraha jasiiradaha, Manasseh Sogavare, ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin 36 saacadood ah Arbacadii ka dib mudaaharaad ballaaran oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Honiara, halkaas oo mudaaharaadayaashu ay ka dalbadeen inuu iscasilo. Hal mar, mudaharaadayaashu waxay isku dayeen inay xoog ku galaan dhismaha baarlamaanka, ka dibna waxay dab qabadsiiyeen guri guri oo si toos ah ugu dheggan golaha sharci dejinta.
Dukaamo iyo dhismayaal kale oo ku yaal degmada Chinatown ee magaalada ayaa sidoo kale la bililiqaystay oo la gubay, in kasta oo uu socdo xannibaadda iyo amarada bandowga. Burburka ayaa laga soo duubay muuqaallo ku sameynayay internetka, iyadoo dhismayaal burburay iyo kuwo qiiq ah lagu arkay iyadoo ay ku dhex jiraan bad qashin ah.
Jimcihii, markii shaqaalaha Australia ay yimaadeen, Raiisel wasaaraha ayaa mudaaharaadyada ku xiray dalal shisheeye oo aan la cayimin, isagoo sheegay in mudaaharaadayaasha "lagu quudiyay been been abuur ah oo ula kac ah" oo ku saabsan xiriirka jasiiradaha ay la leeyihiin Beijing.
"Wadamadan hadda saamaynta ku leh [Dibad-baxayaashu] waa dalalka aan doonaynin inay xidhiidh la yeeshaan Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha, waxayna ku niyad-jabiyaan Solomon Islands inay galaan xidhiidh diblomaasiyadeed," ayuu yidhi Sogavare, inkasta oo uu diiday inuu magacaabo midna. qaran gaar ah.